यहाँ बावुले-छोरीसँग र दाजुले-बहिनीसँग अनैतिक कार्य गर्दै थिए, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
यहाँ बावुले-छोरीसँग र दाजुले-बहिनीसँग अनैतिक कार्य गर्दै थिए
विश्व । बावुले छोरीलाई, अनि दाजुभाइले दिदीबहिनीलाई अनैतिक क्रियाकलाप गरेको सुन्दैमा अचम्म लाग्दो छ। तर अस्ट्रेलियामा एउटा यस्तै घटना सार्बजनिक भएको छ, जसले मानव सभ्यतालाई लज्जित बनाएको छ ।
समाचारमा उल्लेख गरिएअनुसार, अस्ट्रलियामा एउटा यस्तो परिवार पत्ता लागेको छ जहाँ बावुले-छोरीसँग र दाजुभाइले-दिदीबहिनीसँग यौन सम्बन्ध राख्ने गरेका थिए, र बच्चा पनि जन्माइरहेका थिए । ३८ जना भएको यो परिवारको बास भने झोपडी, टेन्ट तथा काराभान थियो । स्थानिय सरकारले यीनिहरुको क्याम्पबाट १२ अशिक्षित तथा कुपोषित बच्चाहरुको उद्धार गरेर उनीहरुलाई चाइल्ड केयरमा पठाएको छ । यो मुद्धाको सुनुवाई यही शुक्र्रबार अस्ट्रलियाको सिडनी कोर्टमा भएको थियो र परिवारका सबै वैश्क सदस्यहरुलाई जेल चलान गरिएको छ ।
यो घट्ना छ वर्ष पहिले सन २०१२ मा रेकर्ड भएको हो तर चिल्ड्रेन कोर्टका न्यायाधिषले विरलै घटित घटनाका रुपमा यो विषयलाई लिए र यस घटनासँग सम्बन्धी मुद्धालाई सबै सामु सार्बजनिक गर्ने फैसला गरे ।
अस्ट्रलियाको न्यू साउथ वेल्समा बसोबास गर्ने यो परिवारको बारेमा यतिबेला खुलासा भयो जब यो परिबारका बच्चाहरु आफू पढ्ने स्कुलको मैदानमा परिवारमा हुने यौन क्रियाकलापका बारेमा कुरागर्दै गरेको सुनियो । बच्चाले आफ्नो साथीलाई आफ्नो दिदी प्रेगनेन्ट भएको बताए । तर परिवारलाई थाहा भएन कि गर्भमा रहेको बच्चाको बावु कुन चाँही दाजु वा भाइ हो।
यस्तो सुनेपछि प्रहरी उक्त परिवार बस्ने टहरामा पुग्यो । प्रहरी त्यहाँ पुग्दा एक जना दाजु र बहिनी ओछ्यानमा श्रीमान र श्रीमति जस्तै सुतिरहेका थिए ।
यस्तो यौन क्रियाकलापमा १२ वर्ष सम्मका युवायुवतीको सम्लग्नता थियो । परिवारका सदस्यले बताएअनुसार, यसको सुरुवात पछिल्लो शताब्दीको शुरुवातदेखि सुरु भएको हो, जतिबेला परिवारका नाइके जून कल्ट समेत यस्तो आमाबुवाबाट जन्मिएका थिए जो एकआपसमा दाजु-बहिनी थिए ।
अनौठो कुरा के हो भने स्थानीय प्रहरी यो स्थानमा पुग्नु अघि यस छेउछाउका कसैलाई पनि यो परिवारीक यौन क्रियाकलापका बारेमा जानकारी थिएन ।
चन्द्रमामा उम्रेका बिरुवाले रातको चिसो खप्न सकेनन्, टुसाए अनी मरे